GlobalNet | Desktop asaService (Amazon Workspace)
Desktop asaService (Amazon Workspace)
သင့်လုပ်ငန်းမှာ Desktop သုံးစွဲမှုများပြားသည့်အတွက် Investment cost တွေ များပြားနေပြီလား???
ရုံးတွင်းဝန်ထမ်းများသာမက ရုံးပြင်ပသွားရောက်လုပ်ကိုင်နေရသောဝန်ထမ်းများပါ အချိန်မရွေး နေရာမရွေး Desktop တစ်လုံးကဲ့သို့အသုံးပြုနိုင်ပြီး investment cost လည်း သက်သာစေမယ့် Amazon Workspace (Desktop-as-a-Service) လေးကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Work From Home လုပ်နေရသော ဝန်ထမ်းများအတွက်ဖြစ်ဖြစ်၊ ရုံးပြင်ပသွားရောက်နေရသော ဝန်ထမ်းများ၊ internship ဝန်ထမ်းများအတွက်အသုံးပြုလိုခြင်းတို့အတွက် မိမိရောက်ရှိရာနေရာမှာ Desktop တစ်လုံးကဲ့သို့ အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Amazon Workspace ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် Desktop Over-buying ဖြစ်ခြင်း၊ Microsoft Window နှင့် Linux တို့ကိုအလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ Virtual Private Cloud ကို အသုံးပြုထားသည့်အတွက် Data များကို ပိုမိုလုံခြုံစိတ်ချရသည့်အပြင် ဝန်ထမ်းများအသုံးပြုမှုအပေါ်မူတည်၍ Scale-Up ကို အချိန်တိုအတွင်းပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် investment cost ကို သိသိသာသာ ထိရောက်မှုရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Global Technology Company မှ Amazon ၏ official partner အဖြစ် Amazon Workspace ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပြီး local engineering team အနေနဲ့ AWS certified engineer များမှဆောင်ရွက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်….
? Visit Now: www.globalnet.com.mm/cloud-services/public-cloud-services/
? Email: digitalsales@globalnetmm.com
Jump-Starting The Digital Acceleration...
Digital transformations are performed ...
How To Deliver Best...
GLOBALNET အနေဖြင့် CUSTOMER များ ...